Voadika ny 31 Janoary 2013 14:56 GMT
Misy ireo vitsy an'isa tsy hita maso ao Bangladesh. Miaina any ambanin'ny tany izy ireo amin'ny ankapobeny ary mahalana ny fisokafan'izy ireo imasom-bahoaka. Ho an'ireo fiarahamonina pelaka, mahatonga azy ireo ho meloka ao amin'ny fireneny ny fironany ara-pananahana. Ankoatra ny tsy famelana azy ireo hizaka ny zony, miatrika fanavakavahana, ompa, herisetra ara-batana sy fihantsiana ara-tsosialy ny Olona LGBT ao Bangladesh. Tsy mankatò ny fanambadiana, fisoratana na mpisakaiza eo amin'ireo olon-dehibe mitovy taovam-pananahana ny firenena